2020 Honda Fit မှာ ဘယျလို လုပျဆောငျခကျြအသဈတှေ မွငျတှရေ့မှာလဲ? - Myanmar Automobile and Equipment Directory
2020 Honda Fit မှာ ဘယျလို လုပျဆောငျခကျြအသဈတှေ မွငျတှရေ့မှာလဲ?
ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့လုံးဝမစိမျးတဲ့ အပွငျ လူတိုငျးနီးပါးစီးဖွဈနတေဲ့ ကားတဈစီးဖွဈတဲ့ Honda Fit က သူတို့ရဲ့ 2020 Model ကို Release လုပျခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ ထှကျတာတော့ ၂ လလောကျရှိပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ information မစုံလငျသေးတာကွောငျ့ မရေးဖွဈသေးတာ ဖွဈပါတယျ။ အခု တဈခုခငျြးစီကို ကြှနျတျောတို့ လိုကျကွညျ့လိုကျရအောငျ။
အပွငျပိုငျး ကနကွေညျ့ရငျလဲ အရငျ ၂၀၁၉ model နဲ့မတူပဲအနညျးငယျ ကှဲပွားနတောကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ အရငျက အနညျးငယျညံ့တယျလို့ သတျမှတျလို့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ A-piller design ကွီးကို ဒီ model မှာ တျောတျော အဆငျပွအေောငျ ပွုလုပျပေးထားပါတယျ။ အရငျ model တှမှော ကားရဲ့ 45 ဒီဂရီလောကျကို ရုတျတရကျကွညျ့လိုကျရငျ မွငျကှငျးကို အနညျးငယျ block လုပျခံထားရတာကိုတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ကားတဈစီးလုံးကို မွငျရပမေယျ့ စကျဘီးလို အရာမြိုးကို တဈခါတဈရံ မမွငျရပါဘူး။ ဒီ Model မှာတော့ ကနြေပျလောကျအောငျ အဆငျပွစေပွေီး ကနျြတဲ့ အပွငျပိုငျး အသှငျအပွငျကတော့ ယခငျ ၂၀၁၉ model အတိုငျးအတူတူပါပဲ။
ဒါဆို ဒီ 2020 model မှာ ဘာထူးခွားတာရှိလဲ ဆိုရငျ ဘာမှ သိပျမရှိပါဘူး။ Honda က သူတို့ရဲ့ Fit Lineup ကို ကွီးကွီးမားမားပွောငျးလဲမှုမြိုး မပွုလုပျသေးပဲ ယခငျ model ကိုပဲ ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျ ပွုလုပျထားခွငျးမြိုး ဖွဈပါတယျ။
သို့သျော… သငျ့အနနေဲ့ Honda Fit 2020 ကို ဝယျယူမယျဆိုရငျတော့ ပွောပွစရာ အကွောငျးပွခကျြကောငျး ၂ ခကျြရှိပါတယျ။ ပထမ တဈခကျြက သငျ့အနနေဲ့ Auto Gear ပဲ မောငျးခငျြသညျ ဖွဈစေ၊ Manual Gear မောငျးခငျြသညျ ဖွဈစေ သငျ့မှာ ရှေးခယျြစရာ ရှိနမှောပါ။ နောကျ တဈခကျြကတော့ OCT လို့ချေါတဲ့ touch screen ကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ 2020 Model ရဲ့ OCT မှာ Android ဖုနျးတှေ အတှကျ Android Auto လို့ချေါတဲ့ နညျးပညာပါဝငျပွီး ကွိုးမလိုပဲ သငျ့ဖုနျးကိုခြိတျဆကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးပွောတာ၊ GPS ကွညျ့တာ၊ သီခငျြးနားထောငျတာ၊ Message ပို့တာကနေ ရာသီဥတုသတိပေးခကျြအဆုံး ပွုလုပျလို့ရပွီး ဖုနျးတဈလုံးအတိုငျး အသုံးပွုလို့ ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ IOS ဖုနျးတှအေတှကျလညျး Apple Carplay လို့ချေါတဲ့ နညျးပညာပါဝငျပါတယျ။
ပုံမှနျဆို ရနျကုနျလို ကားပိတျတဲ့နရောတှမှော Honda Fit စီးရတာ ပငျပနျးပါတယျ။ သူ့ရဲ့ထိုငျခုံက သကျတောငျ့သကျသာ သိပျမဖွဈသလို အနားယူလို့မကောငျးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ 2020 Model မှာတော့ ပိုမိုသကျတောငျ့သကျသာရှိစမေယျ့ ထိုငျခုံတှကေို ထညျ့သှငျးပေးထားတာကိုတှရေ့မှာပါ။ ကောငျးမကောငျးကတော့ စီးကွညျ့မှ သိရမှာပဲ။ မွနျမာနိုငျငံကို ရောကျလာဖို့ အခြိနျအနညျးငယျစောငျ့ရဦးမယျဆိုပမေယျ့ ရောကျလာရငျတော့ သိနျး ၅၀၀ ဝနျးကငျြလောကျဈေးရှိနိုငျပါတယျ။
ဒီကားတှကေို Japan နိုငျငံမှာပဲ ထုတျခဲ့တာ ဖွဈပွီး Fit တှရေဲ့ အစဉျအလာအတိုငျးပဲ အကွမျးခံပွီး ပစ်စညျးအမြားကွီးဆနျ့တဲ့ ကားသေးလေး ဖွဈနဆေဲပါပဲ။ မွငျးကောငျရအေားကတော့ Manual Gear မှာ 130 hp ရှိပွီး၊ Auto မှာတော့ 128 hp ရှိပါတယျ။ Lineup ကတော့ ၄ မြိုးဖွဈပွီး LX, Sport, EX, EX-L ဆိုပွီး ရှိပါမယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ Fit စီးနသေူတှေ မြားစှာရှိပွီး တဈကယျ့ကို Low-budgets ကားတဈစီးပါပဲ။ ခရီလမျး အခကျအခဲကွောငျ့ အောကျပိုငျးကိုငျရတာလောကျပဲ ရှိမှာပါ။ သိပျကွီးကွီးမားမား ပွငျစရာမလိုပဲ အကွမျးခံတဲ့ ကားတဈစီး အနနေဲ့ ဒီ 2020 Model မှာလဲ ဆကျလကျရပျတညျနဦေးမလား။ သငျရော ဒီကားကို ဘယျလိုမွငျလဲ ဆိုတာကို အောကျက comment မှာ ဝငျရောကျဆှေးနှေးသှားလို့ ရပါတယျ။ သွျော… မတေ့ော့မလို့၊ ဒီကားက rating တော့ တျောတျောကောငျးတယျနျော။
2020 Honda Fit မှာ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေ မြင်တွေ့ရမှာလဲ?
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လုံးဝမစိမ်းတဲ့ အပြင် လူတိုင်းနီးပါးစီးဖြစ်နေတဲ့ ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Honda Fit က သူတို့ရဲ့ 2020 Model ကို Release လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်တာတော့ ၂ လလောက်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် information မစုံလင်သေးတာကြောင့် မရေးဖြစ်သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု တစ်ခုချင်းစီကို ကျွန်တော်တို့ လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အပြင်ပိုင်း ကနေကြည့်ရင်လဲ အရင် ၂၀၁၉ model နဲ့မတူပဲအနည်းငယ် ကွဲပြားနေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က အနည်းငယ်ညံ့တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ A-piller design ကြီးကို ဒီ model မှာ တော်တော် အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အရင် model တွေမှာ ကားရဲ့ 45 ဒီဂရီလောက်ကို ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် မြင်ကွင်းကို အနည်းငယ် block လုပ်ခံထားရတာကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားတစ်စီးလုံးကို မြင်ရပေမယ့် စက်ဘီးလို အရာမျိုးကို တစ်ခါတစ်ရံ မမြင်ရပါဘူး။ ဒီ Model မှာတော့ ကျေနပ်လောက်အောင် အဆင်ပြေစေပြီး ကျန်တဲ့ အပြင်ပိုင်း အသွင်အပြင်ကတော့ ယခင် ၂၀၁၉ model အတိုင်းအတူတူပါပဲ။
ဒါဆို ဒီ 2020 model မှာ ဘာထူးခြားတာရှိလဲ ဆိုရင် ဘာမှ သိပ်မရှိပါဘူး။ Honda က သူတို့ရဲ့ Fit Lineup ကို ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုမျိုး မပြုလုပ်သေးပဲ ယခင် model ကိုပဲ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်… သင့်အနေနဲ့ Honda Fit 2020 ကို ၀ယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောပြစရာ အကြောင်းပြချက်ကောင်း ၂ ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမ တစ်ချက်က သင့်အနေနဲ့ Auto Gear ပဲ မောင်းချင်သည် ဖြစ်စေ၊ Manual Gear မောင်းချင်သည် ဖြစ်စေ သင့်မှာ ရွေးချယ်စရာ ရှိနေမှာပါ။ နောက် တစ်ချက်ကတော့ OCT လို့ခေါ်တဲ့ touch screen ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 2020 Model ရဲ့ OCT မှာ Android ဖုန်းတွေ အတွက် Android Auto လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာပါဝင်ပြီး ကြိုးမလိုပဲ သင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းပြောတာ၊ GPS ကြည့်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ၊ Message ပို့တာကနေ ရာသီဥတုသတိပေးချက်အဆုံး ပြုလုပ်လို့ရပြီး ဖုန်းတစ်လုံးအတိုင်း အသုံးပြုလို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IOS ဖုန်းတွေအတွက်လည်း Apple Carplay လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာပါဝင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဆို ရန်ကုန်လို ကားပိတ်တဲ့နေရာတွေမှာ Honda Fit စီးရတာ ပင်ပန်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထိုင်ခုံက သက်တောင့်သက်သာ သိပ်မဖြစ်သလို အနားယူလို့မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 2020 Model မှာတော့ ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေမယ့် ထိုင်ခုံတွေကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ကောင်းမကောင်းကတော့ စီးကြည့်မှ သိရမှာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာဖို့ အချိန်အနည်းငယ်စောင့်ရဦးမယ်ဆိုပေမယ့် ရောက်လာရင်တော့ သိန်း ၅၀၀ ၀န်းကျင်လောက်ဈေးရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီကားတွေကို Japan နိုင်ငံမှာပဲ ထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Fit တွေရဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်းပဲ အကြမ်းခံပြီး ပစ္စည်းအများကြီးဆန့်တဲ့ ကားသေးလေး ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ မြင်းကောင်ရေအားကတော့ Manual Gear မှာ 130 hp ရှိပြီး၊ Auto မှာတော့ 128 hp ရှိပါတယ်။ Lineup ကတော့ ၄ မျိုးဖြစ်ပြီး LX, Sport, EX, EX-L ဆိုပြီး ရှိပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Fit စီးနေသူတွေ များစွာရှိပြီး တစ်ကယ့်ကို Low-budgets ကားတစ်စီးပါပဲ။ ခရီလမ်း အခက်အခဲကြောင့် အောက်ပိုင်းကိုင်ရတာလောက်ပဲ ရှိမှာပါ။ သိပ်ကြီးကြီးမားမား ပြင်စရာမလိုပဲ အကြမ်းခံတဲ့ ကားတစ်စီး အနေနဲ့ ဒီ 2020 Model မှာလဲ ဆက်လက်ရပ်တည်နေဦးမလား။ သင်ရော ဒီကားကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ဆိုတာကို အောက်က comment မှာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ ရပါတယ်။ သြော်… မေ့တော့မလို့၊ ဒီကားက rating တော့ တော်တော်ကောင်းတယ်နော်။
CAR SERVICING EQUIPMENT နှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်း ၂၄ ခုကိုရှာဖွေရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။